Ex Files2: The Back Up Strikes Back ( 2015 ) - Myanmar Asian TV
Ex-Files ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Ex-Files2လေးကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် …
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Ryan Zheng Kai နှင့် Amber Kuo တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
KPop Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Exo Group မှ Yixing Zhang လဲ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ် …
Ex-Files2ကတော့ အမျိုးသမီးတွေ အကြည့်သင့်ဆုံး ဇာတ်ကားပါ … ဘာလို့ဆိုရင် ကိုယ့်ကို ပစ်သွားတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို ဘယ်လိုပြန်စည်းရုံးပြီး ချေပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ပါဝင်ထားလို့ပါ ?
အလှအပကိုစိတ်​မဝင်​စားဘဲ အလုပ်​ကိုပဲ အာရုံစိုက်​ခဲ့တဲ့ လက်​​ထောက်​ကြော်​ငြာဒါရိုက်​တာမ​လေး ရိရှီ ဟာ … သူ့ရဲ့ crush ဖြစ်​တဲ့နာမည်​ကြီးမင်းသား ယွိ​ဖေးနဲ့ ​တွေ့ဖို့ အ​ကြောင်းဖန်​လာခဲ့ပါတယ် …
အဲ့နောက် မင်းသား ယွိဖေး က ဒါရိုက်တာမလေး ရိရှီ ကို One Night Stand အဖြစ် အသုံးချသွားပါတယ် …
ထိုအကြောင်း ရိရှီ က သတိမထားမိပဲ … သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူရည်းစားတွေ ဖြစ်ပြီလို့ မှတ်ယူကာ … ချစ်သူရည်းစားကြားက အပြုအမူတွေ လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ် …
ဒါပေမဲ့ ယွိဖေး က ရိရှီ ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာ ပလစ်သွားပါတော့တယ် … အဲ့နောက် ရိရှီ က အသည်းတွေကွဲပြီး ခေါက်ဆွဲစားရင်း အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆရာကြီး တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ကံကြမ္မာက ဖန်လာခဲ့ပါတယ် …
အဲ့နောက်တော့ ထိုဆရာကြီးရဲ့ သင်ပြမှုနဲ့ ရိရှီ တစ်ယောက် ယွိဖေး ကို ဘယ်လိုတွေ ပညာပြန်ပြမလဲ ? သိမ်သွင်းမလဲ ? ဖြားယောင်းမလဲ ? ဆိုတာတွေကို ဟာသလေးတွေ အမြောက်အမြားရောပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ် …
ဟာသလေးတွေရော , အချစ်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်လေးတွေပါ များစွာပါဝင်တာကြောင့် မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ အထူးသဖြင့် ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ …
Rating အရ IMDb မှာ 4.6/10 ရရှိထားတဲ့ Chinese Romance , Comedy ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ …
Translator : ShinE
Actors: Amber Kuo, Eric Wang, Ryan Zheng Kai, Yixing Zhang, Zhang Dianlun
Openload.co Myanmar811 MB Download Soliddrive.co Myanmar811 MB Download
Café. Waiting. Love ( 2014 )
Taiwan Romance ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … အချစ်ဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ … ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ – ” အားထူး” ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ရှုံးနိမ့်မှုတွေ များပေမယ့် အရှူံးကိုရင်ဆိုင်ပြီး ဘ၀ကို ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာကောင်းအောင် နေထိုင်ပုံတွေကို လူငယ်ဆန်ဆန်ပြကွက်တွေနဲ့ ဖော်ကျူးထားပါတယ် … အခြားသော…
Trailer: Ex Files2: The Back Up Strikes Back ( 2015 )